निर्मलाको हत्या कसले गर्‍यो ? यस्तो छ बाबुरामको आशंका
काठमाडौं, १० मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले निर्मलाको हत्या तालिम प्राप्त व्यक्तिले गरेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार निर्मलाकी बिरामी पिता र आमालाई भेट्न शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका भट्टराईले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘निर्मला पन्तको जुन ढंगले घाँटी थिचेर हत्या गरिएको छ र जानकारहरुका अनुसार त्यस विषयमा जान्ने अथवा अपराध अनुसन्धान गर्न जान्ने अथवा त्यस ढंगको गतिविधि गर्न जान्ने सुरक्षा अंगका मान्छे अथवा तालिम प्राप्त मान्छेले मात्रै त्यसरी घाँटी निमोठेर हत्या गर्न सक्छन् भन्ने पनि आम आशंका छ,’ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले भने ।
यस्तो छ बाबुरामको आशंका-
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ठिक चार महिना बित्यो । चार महिना बितिसक्दा पनि भरपर्दो ढंगले खोजअनुसन्धान नहुनु र उल्टै प्रमाण मेटाउनेहरुमाथि कुनै कारबाही नगर्नु र अन्य थुप्रै शंकाको वातावरण देखिइरहेको छ, त्यसले गर्दा राष्ट्रिय मुद्दा यो बनिसकेको छ । त्यसैले, हामी सबै यसमा लाग्छौं र लाग्नै पर्छ ।
अहिले हामी उहाँहरुलाई भेट्न आएका हौं । अनिल पाण्डे र सरस्वती भट्टराई, जो गोरखा मसेलका हुनुहुन्छ, उहाँहरु अहिले अष्ट्रेलियाको क्यानबेरा हुनुहुन्छ । उहाँहरु नयाँ शक्तिको अभियन्ता हुनुहुन्छ । हिजो उहाँको छोरीको जन्मदिन थियो । यहाँको घटना सुनिसकेपछि र उहाँहरुको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर र दुई छोरीहरु पढाउनेपर्ने छ भन्ने थाहा पाएपछि उहाँहरुले हिजो मलाई फोन गर्नुभयो । उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘हामी छोरीको जन्मदिन मनाउने खर्च उहाँहरुलाई पठाउँछौं, तपाईंले दिनुहोला ।’ उहाँहरुले पठाउनुभएको रकम मैले हस्तान्तरण गरेको हुँ ।
घटनामा दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर देखिएन । यो घटनामा बर्खास्त मात्रै गर्नु कुनै कारबाही नै होइन । बर्खास्त कुनै दण्ड हो ? त्यस्तो मान्छेलाई स्वतः कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही पो गर्नुपर्छ, जसले प्रमाण मेटाएको छ ।
तपाईं हामी सामान्य मान्छे बाटोमा हिंड्दा केही यस्तो घटना देखियो भने प्रहरीलाई नभनी छुँदैछुँदैनौं । झन् प्रहरीकै मान्छेले सबैले देख्ने गरी प्रमाण मेट्ने, धोईपखाली गर्ने, कपडा धुने, संवदेनशील अंगहरु जहाँबाट तथ्य प्रमाणहरु मिल्न सक्थ्यो, त्यो पखालेको त प्रष्टरुपमा देखिन्छ । प्रहरीलाई त्यति कमनसेन्स पनि हुँदैन ? थाहा हुँदैन ?
सचेत ढंगले प्रमाण मेट्नुको अर्थ प्रमाण मेटाउनेहरुलाई अपराधी थाहा छ भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यसकारण तिनीहरुलाई प्रक्राउ गरेर जुन विधिहरु छन् अनुसन्धानका, त्यसको राम्रो प्रयोग गर्न सक्ने हो भने त त्यहीँबाट पत्ता लाग्छ । त्यसमाथि सरकारले उनीहरुलाई संरक्षण गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो शंकाको विषय छ । अहिले जनतामा परेको छ कि यो घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै मुछिएका छन् । त्यसैले सरकारमा रहेका मानिसहरुले अपराधीलाई ढाकछोप गरिरहेका छन् भन्ने व्यापक आशंका छ । यो आशंकामा दम पनि छ । यो आशंकाको कुरा मात्र होइन ।
यसर्थ, हाम्रो भनाई के हो भने कमसेकम जसले प्रमाण मेटायो, तिनलाई तपाईंले मुद्दा चलाउन सुरु गर्नुहोस् । अनुसन्धान गम्भीर ढंगले गर्नुहोस् । किन गर्नुहुन्न ?
यसको अतिरिकत, निर्मला पन्तको जुन ढंगले घाँटी थिचेर हत्या गरिएको छ र जानकारहरुका अनुसार त्यस विषयमा जान्ने अथवा अपराध अनुसन्धान गर्न जान्ने अथवा त्यस ढंगको गतिविधि गर्न जान्ने सुरक्षा अंगका मान्छे अथवा तालिम प्राप्त मान्छेले मात्रै त्यसरी घाँटी निमोठेर हत्या गर्न सक्छन् भन्ने पनि आम आशंका छ ।
त्यसैले, शंकाको सुविधा सत्तामा भएका मानिसहरुमाथि, सुरक्षा दिने मानिसहरुमाथि नै सोझिन्छ नि ! त्यसैले यो विषयको निवारण सरकारले गर्नुपर्दैन ? त्यसैले यो गम्भीर विषय छ । बलात्कार र हत्या यसै पनि गम्भीर विषय हो, तर त्यसमाथि ढाकछोप थप गम्भीर अपराध हो । यसर्थ, यो विषयमा सबै न्यायप्रेमी नेपालीहरु लागिरहेका छन्, र लाग्नुपनि पर्छ । म सबैले यही अपिल गर्न चाहन्छु ।